FAHAFATESAN’NY ZANDARY IRAY TANY BETROKA : Nijanona tampoka ny fon’ny reniny
Maty ny Alahady hariva teo ny renin-dRalaivao René Germain, ilay Zandary maty notifirin’ny dahalo tao Betroka, ny faran’ny herinandro iny. 17 octobre 2017
Fantatra fa vao nilazana ny fahafatesan’io zanany lahy io ity renim-pianakaviana ity dia tsy nahazaka izany ny fony ka torana tampoka. Voatery nampidirina hopitaly tao Nasandratsony Fianarantsoa, tsy nahatsiaro tena nanomboka tamin’io fotoana nandrenesany ny vaovao ratsy momba an-janany io izy ka hatramin’ny ora nahafatesany io, araka ny loharanom-baovao.
Raha tsiahivina dia maty amperinasa i Germain, ny alakamisy hariva teo no nitrangan’ny fanafihan-dahalo tao amin’ny Kaominina Evaho, Distrikan’i Betroka.
Nisy ny fifandonana teo amin’ireo mpitandro filaminana sy ireo andian-dahalo ary voatifitra nandritra izany ity farany ka naratra mafy. Mbola noentina namonjy toeram-pitsaboana tao an-tampon-tanànan’i Betroka i Germain saingy ora vitsy taty aoriana dia tsy tana ny ainy.